TOP NEWS: Gabdhaha Jaaliyada Gobolka Hiiraan ee Mareykanka oo Sheegay in aan la aqbali karin in Dowlada ay caburiso rabitaanka Shacabka ku sugan Gobolka Hiiraan+ Warsaxaafadeed – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Gabdhaha Jaaliyada Gobolka Hiiraan ee Mareykanka oo Sheegay in aan la aqbali karin in Dowlada ay caburiso rabitaanka Shacabka ku sugan Gobolka Hiiraan+ Warsaxaafadeed
by admin 28th March 2016 28th March 2016 043
Kulan Jaaliyada Gabdhaha Gobolka Hiiraan ay ku yeesheen Dalka Mareenka ayay uga hadleen Shirarka looga hadlayo Maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha DHexe Dowlada ay ku doonayso in Goboladaas ay u samayso.
Intii kulanka uu socday waxa lagu soo hadal qaatay sida muhiim ay u tahay in Dowlada ay tixgaliso rabitaanka Hogaanka Dhaqanka iyo Shacabka ku nool Gobolka Hiiraan ee ku wajahan in Gobolka loo madaxbaneeyo aayo ka tashigiisa.
Gudoomiyaha Gabdhaha Jaaliyada Gobolka Hiiraan Qaali Maxamed Maxamuud ayaa kulanka ka sheegtay in aan wax la aqbali Karin ay tahay in Dowlada ay caburiso rabitaanka Shacabka ku sugan Gobolka Hiiraan.
“Waa in marka hore la helaa dib u heshiisiinta Dowlada waxa ay doonaysaa in danaheeda gaar ah mana Ogolaanayaan arintaas dadka reer Hiiraan waxana jira duulaan siyaasadeed oo gobolka Dowladu ay ku qaaday “ sidaa waxa sheegay Gudoomiyaha Jaaliyadda Gabdhaha Gobolka Hiiraan.
Waxa sidoo kale kulankan waxa lagu sheegay in Dowlada ay hurinayso colaad ka dhacda Gobolkaas oo tusaalle u ah dagaal ka dhacay qoraxsinka Beledwayne markii Odayaasha qaar ay heshiis la qaateen Madaxwayne Xasan Shiikh Maxamuud.
“Dowlada waa in ay faragalinta qaawan ay ka daysaa dadka ku nool gobolka Hiiraan isla markaana ay ogolaataa in talaabooyinka Hogaanka dhaqanka” sidaa waxa markale ka sheegtay kulanka Qaali Maxamed Maxamuud.
Heshiiska Dowlada ay la gaatay qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ayaa kulanka la sheegay in uusan waxba ku soo kordhinaynin xaalada hada ka jirta Gobolka Hiiraan oo doonaya in uu noqdo gobol si madax banaan u samaysta Maamulka dadka raali ay ka yihiin.
Gudoomiyaha Jaaliyada Gabdhaha Gobolka Hiiraan.
Qaali Maxamed Maxamuud.
Daawo: Puntland iyo Dowlada Federaalka oo Garoowe ku dhagax dhigay Mashruuca Taakuleynta Isgaarsiinta (ICT)
Xasan Sheekh Maxamuud, oo maanta xafiiskiisa warqadihii aqoonsiga kaga guddoomay danjiraha cusub ee waddanka Russia wakiilka uga noqon doona Soomaaliya+ Sawiro
GOBOLKA MUDUG OO BARAARUGAY GARTAYNA DANTIISII
Tifaftiraha K24 25th February 2016
Kooxda Al-Shabaab oo sheegatay Masuuliyada Qarax saakay lagu dhaawacay.
admin 1st February 2020
Wasaarad kamid ah Wasaaraddaha Dowlad goboleed-yada oo Xiriirka u jartay Wasaaradda Dastuurka Federaalka